Immisa ayaad Bixineysaa Falanqaynta Bilaashka ah? | Martech Zone
Thursday, April 22, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Barbara Jones oo ka socota blog-ka 'Stellar Thoughts' ayaa wareysi u sameysay iyada Kulamada Istaraatiijiyada CRM Podcast iyadoo la adeegsanayo Skype. Runtii aad baan ula dhacay tayada maqalka (ilaa iyo hoos shimbirta oo ku xoqaysa xagga dambe ee gurigayga). Waan ka wada hadalnay Analytics guud ahaan iyo sidoo kale sababta qof dhab ahaantii u bixin lahaa lacag Analytics xirmo.
Barb waxay ka caawisaa ganacsiyada yaryar hirgelinta, dejinta iyo istiraatiijiyadda a emaylka iyo maaraynta xiriirka macaamiisha (CRM) xalka loo yaqaan 'Infusionsoft'. Kuma daboolin dhammaan sababaha galka (Podcast) laakiin halkan waxaa ku yaal dhowr:
Inta badan la bixiyo Analytics bixiyeyaashu sidoo kale waxay bixiyaan fulin iyo tababar sidoo kale. Furitaanka lacag bixin Analytics xirmo sida Webtrends ayaa ku siin kara fursad aad ku hesho boqolaal warbixinno ah. Google dhexdeeda, waa inaad ku dartaa oo aad wax ka beddeshaa astaamaha, oo aad ku dhistaa warbixinno kuu gaar ah. Maaha wax lagu farxo haddii aadan waligaa horay u qaban shaqadan oo kale!
Google Analytics waxay leedahay dib u dhac weyn oo ku saabsan soo qabashada xogta waxayna leedahay xadeyn ku saabsan inta xogta la qabtay. Taasi waa naafonimo halis ah markaad u baahan tahay inaad ka jawaab celiso meheraddaada internetka.
Sababtoo ah iyagu iskuma dayaan inay si fudud ula socdaan dalabkooda, oo la bixiyo Analytics bixiyeyaashu waxay leeyihiin ilo ay ku sii wataan kor u qaadista wax soo saarkooda. Webtrends, tusaale ahaan, wuxuu leeyahay isdhexgalka moobaylka, Facebook Analytics isdhexgalka, cabirka warbaahinta bulshada, martida xogta martida iyo qaab adag oo ah API-yada jiidaya iyo riixaya xogta.
Gunta ayaa ah mararka qaarkood bilaash ayaa ku baxa kharash. Iyadoo Analytics, Waxaan rumeysanahay in kharashku muhiim u yahay bartamaha iyo ganacsiyada waaweyn ee saamaynta weyn ku yeelan kara istiraatiijiyadooda suuq geynta haddii ay awoodaan inay aqoonsadaan fursadaha dakhliga. Jawaabaha la'aan waxay ubaahanyihiin inay gaaraan go'aano waafi ah, waxay si fudud waqti iyo lacag ugu luminayaan codsi bilaash ah.
Waa kuwan Podcast-ka:
[maqalka: https: //martech.zone/wp-content/uploads/2010/04/WebAnalyticso-StellarThoughts.mp3]
Tags: sicirka-ku-gaadhiga wareegaSuuq Goobidcalaamadeynta bulshada
Waxaan u maleynayaa in qalabka bilaashka ahi u fiican yahay shirkadaha yar yar ee u baahan jihada guud ee suuq geyntooda. laakiin markii ay sii weynaadaan shirkaduhu, waxay inbadan maalgashadaan suuq geyntooda, waxaay ubaahanyihiin falanqeyntooda guud